Kuphuhliso lomntwana, umdlalo udlala indima ebalulekileyo. Umdlalo uhlakulela imigangatho yokuziphatha, ukhulisa izakhono zokuthetha kunye nezomzimba, ukucinga nokuthetha. Ayenzeki ngokwayo, kodwa kuphela ngokuthatha inxaxheba yabantu abadala. Abazali bafundisa abantwana ukuba badlale ngamathoyizi, kwaye ngexesha lomdlalo nabanye abantwana bafundiswa ukukhusela iminqweno yabo, bahlonele iqabane, batshintshe baze bavumelane. Ezi zakhono azibonakali ngokukhawuleza. Abantwana ngeminyaka emi-4 okanye emihlanu sele beyazi indlela yokudlala ngokuzimela. Abazali bakhombisa ukuba zininzi izinto ezinomdla ongayithola ngokudlala umdlalo. Kwaye umntwana ufunda. Indlela yokufundisa umntwana ukuba adlale ngokuzimela, sifunda kule ncwadi.
Iimidlalo ezidibeneyo zincedo kubantwana nakubantu abadala kwiindawo eziphuhlisayo, zokuthetha, nemvakalelo. Njengomphumo wemidlalo, ubudlelwane phakathi kwabantwana nabazali bukhula. Kodwa kukho amaxesha apho ufuna ukuba umntwana azenzele yena ngokwakhe kwaye anakekele into ethile ngokwabo.
Ixesha elide abantwana badlala ngokuzimela, kodwa xa lo msebenzi uhlambalaza, baqala ukubiza unina. Akufanele usebenzise kakubi le nto, kodwa ngamanye amaxesha ukuzimela oku kusinceda xa ufuna ukuthetha kwifowuni, yenza ukucoca, upheke isidlo sakusihlwa. Kukho abantwana abanjalo abaya kuba bodwa kwimizuzu. Into enkulu enokwenziwa yinto yokudlala entsha. Kodwa xa eyazi, umntwana uya kufuna ukuba khona komama. Okokuqala, yinto yomkhwa, usebenzise nje umntu ohlala ehleli. Ngokuqhelekileyo kwenzeka ukuba unina akayidlala, kodwa nje "ubonisa" umdlalo, kwaye ushiye yodwa ngamathoyizi, umntwana engazi ukuba benzani nabo, njengokuba umama akwenza konke, kwaye yonke into iyawa ezandleni zakhe. Indlela kuphela yokuphuma ukufundisa umntwana ukuba adlale eyedwa.
Abantwana abangaphantsi kweminyaka kunye nesiqingatha abakwazi ukudlala ngamathoyizi ngokwabo, bawazi kuphela iimpahla zabo, baphatha izinto. Abantwana abakwazi ukudlala ngeidayisi, badlala needodoli, abazi ukuba badlale ngayo ngeemoto, kodwa bathanda yonke into ekhanyayo, ixubha, iguqa. Ngoku ezininzi imidlalo ezithuthukayo zithengiswa, ziyakhathalela kakhulu abantwana. Ukuba iityshi ziyakhathaza, unokutsala umntwana ngento engavamile, entsha. Abantwana bathanda izitsha zasekhitshini, kuba ezi zinto zisebenzise ngobuchule uMama. Bafuna ukubamba izandla zabo.
Unako ukunika umntwana ipenki embalwa ngamabhodlela, ngoko ayiyingozi, inzima. Uya kuyonwaba ukwenza oku, bawagubungele ngamabhodlela, uwabeke omnye komnye, kwaye ngokuqhelekileyo uyakhonkqisa, le ngxolo iya kufuneka ibekezelele. Unokwenza umdlalo othakazelisayo. Thatha ibhotile yeplastiki uze uyigcwalise ukuya kwisiqingatha ngamanzi, kwaye ngaphakathi kuyo kufaka izibalo zezilwanyana kunye namanani ejometri ezenziwe kwipilisi enemibala emininzi. Umntwana uya kuguqula ibhotile, kwaye ujonge ukuba amanani ayakhupha ahla.
Qinisekisa ukuba isiqhekeza senziwe kakuhle, okanye kufuneka uhlambulule. Omnye umdlalo onokuthula: kwisibhotile seplastiki esingenalutho unako ukubeka iipenki ezinemibala eyahlukeneyo, ngaphandle kweentonga. Esi sifundo siya kubanceda kwaye sinomdla, siphuhlisa izakhono zezithuthi ezifanelekileyo, ukulungelelaniswa kweminyango nokujonga umbala. Ngokuqinisekileyo, emva komdlalo uza kufuneka uqokelele kuyo yonke indawo, kodwa wena ngokwakho, uza kubelana nesahlulo seyure. Umdlalo obalaseleyo uza kubakho ukuqokelela iipuzzle.
Kwaye nangona le mdlalo yenzelwe abantwana abangaphezu kweminyaka emithathu ubudala, kodwa kubantwana abancinane ungenza iipuzzle. Ukwenza oku, kufuneka unamathele imifanekiso kwikhadibhodi ngamacandelo ngamnye, ukuze emva kokuba uyinqumle, kuya kuba nomfanekiso opheleleyo kwicandelo ngalinye, kwaye kungekhona nje kwiipuzzle eziqhelekileyo, kuphela inxalenye yalo. Le nto ingaba igumbi apho izilwanyana ezincinci zihleli khona, indlela neemoto, ukucoca ngeentyantyambo, konke kuxhomekeke kwiingcamango zakho.
Idibhodibhodi idinga ukunqunyulwa kwiinqununu ezinkulu, zimele zibe zikhulu ngobukhulu. I-puzzle nganye kufuneka ibe kwicandelo eline-4, inxalenye nganye ngumfanekiso opheleleyo, kuba umntwana akakwazi ukuqonda yonke indawo yaloo nto, kwaye akayi kubonisa umdla. Umntwana kufuneka afundiswe ukudlala, ukuze aqonde, ngenxa yoko kufuneka adlale kunye kwaye abonise indlela yokuqoqa iipuzzle. Emva koko yena uya kujonga ezi mifanekiso aze azame ukuzibeka phantsi.
Abantwana abasebekhulile bangafundiswa imidlalo emele. Uya kuqhubeka udlala imidlalo kunye naye, kodwa kungekhona nangaphambi kwexesha lakho lokukhulula. Zama, ukuba ngexesha lemidlalo edibeneyo angabonisa isinyathelo. Ngokomzekelo, ukwakha ipiramidi yeekerubhi, faka ii-cubes ezimbini phezu komnye nomnye uze ucele umntwana ukuba enze okufanayo. Isenzo ngasinye ozenzayo, chaza: kwavela indlu, inqaba. Ukuba akwenzi, zama ukumnceda, kwaye ujonge kwaye udumise umntwana wakho ngaso sonke ixesha. Umthetho ngobumnene, kwaye ukuba into ayifuni ukuyenza, ungagxininisi.
Konke okwenzekayo, gqabaza. I-Parallel iyazi umntwana kunye neepropati zamathoyizi (hlobo luni lweenwele ezithambileyo idonsa, indlela amavili ajikeleza ngayo kumatshini wokuchwepta, yintoni ebonakalayo ikhonksi). Yonke into ebonisiwe, makamve aze amshiye yedwa ixesha. Ngokuqinisekileyo, umntwana uya kuguqula itekisi ezandleni zakhe, afunde kwaye afumene iimpawu kunye neempawu zayo ezintsha. Kungcono ukukhetha ezinye imidlalo ezithule kunye ezihambayo. Ukuba usanda kudlala nebhola, yitshintshe ukuze ubuke imifanekiso kwiincwadi, ukulandelela iipuzzle.
Bonke abantwana bathanda ukuphulaphula iingoma zomntwana okanye iingoma zabantwana. Ingane inokudlala imidlalo kwaye iphulaphule ngeli xesha. Ukuba ufuna into ethile yokuhlala umntwana, faka iingongoma, imibongo yabantwana, umculo.
Ngoku siyazi indlela yokufundisa umntwana ukuba adlale ngokuzimela. Ayikho iresiphi enye yokufundisa abantwana, kwaye umntwana ngamnye kufuneka akhululwe ngabanye, ahlole kwaye afumaneke, acingisise ngeemfuno kunye neminqweno yomntwana wakho. Unomonde okwaneleyo, hlala uxolo. Zama ukuhlakulela ingcamango yomntwana wakho, inceda ukubandakanya kumdlalo kwaye uyifake. Into eyona nto kukuthanda umntwana kwaye ukwazi ukuba ungobuqili, okwaziyo kunye nolona lungcono. Le ntembelo unako ukunika umntwana, kwaye uya kuphumelela.
Unyango olunzulu lweemeko ze-septic kwiintsana
Yintoni enokuyenza xa umntwana egula
Indlela yokukhulisa umntwana
Ukunyaniseka imihla ngemihla: ukuzivocavoca kweminwe nezandla
Ikhwalithi yefestile yamantombazana
Indlela yokucoca ngokusesikweni
Ukupheka kwamadoda ukuze unyango lwe-cholelithiasis
Yintoni eyenziwe intombazana ngosuku?
Ukuphulukisa iipropati ze-ash ash ash
Indlela yokunciphisa umzimba kwaye ungabi nesisindo
Ilayiti yelayisi kwi-multivariate